Ny lakileny telo hamahana ny olan'ny teknolojia goavana amin'ny varotra | Martech Zone
Ny lakileny telo hamahana ny olan'ny teknolojia be loatra amin'ny marketing
Alakamisy Oktobra Oktobra 25, 2018 Alakamisy Oktobra Oktobra 25, 2018 Justin Gray
Matetika loatra, ny teknolojia dia lasa toetran'ny fahombiazana. Meloka aho tamin'io. Mora mividy ny teknolojia ary noho izany dia mahatsapa ho fanavaozana eo noho eo! Ny folo taona voalohany tamin'ny taona 2000 dia ny fidirana rehetra, noho izany dia nihazakazaka nankany amin'ny automatisation marketing tamin'ny tànana malalaka izahay, tao anaty vovoka kaomandy fividianana ary torolàlana azo antoka - nandeha sy nihazakazaka niaraka tamin'ny lampihazo vaovao izahay. Namely an-tsokosoko ireo jamba isika raha ny paikady no resahina satria toa miadana ny paikady; tsy nanao firaisana ilay izy.
Ny marketing dia handeha hipetraka eo amin'ny latabatra fidiram-bola amin'izay ilaina rehetra - ady mafy izany. Saingy rehefa nandalo ny taona ary ny fepetra ROI izay nampanantenaina dia tsy tonga mihitsy, dia niova ho tomany tena izy ireo. Mora ny mitomany an'i Martech rehefa mijery ny valiny ateraky ny - latsaky ny iray isan-jato amin'ireo fitarihana marketing rehetra dia mivadika ho mpanjifa ankehitriny. Fahombiazana manaitra izany. Ary raha tsy mamaha ny fototr'ity soritr'aretina ity isika, dia atahorana hovonoina ny asan'ny varotra, saika talohan'ny nanombohany.
Zava-dehibe ny hanafihantsika an'io olana io amin'ny fotony, satria ireo mpivarotra teknolojia manana famatsiam-bola be dia be dia be dia be dia be no manome tsiny ny zavatra iray mahatonga ny fividianana rindrambaiko bebe kokoa, toy ny fiovan'ny toetran'ny mpividy. Ny fiovana marina tokony hitranga dia ny fomba marketing. Raha te hahomby amin'ny marketing, ary tena hahomby amin'ny asa aman-draharaha, dia tokony hanome hevitra mitovy sy iniana amin'ireo singa telo mifehy izany fahombiazana izany ianao: ny paikadinao, ny haitao misy anao ary ny paikadinao. Ary izy rehetra dia mila ampifanarahana, manerana ny solaitrabe.
Ka ahoana izany? Faly ianao nanontany. Ity ny anjarako.
Paikady: Ny Domino voalohany
Na inona na inona lohatenin'ny asanao, dia mila mahatakatra ny paikadim-panjakana faratampon'ny fikambanana misy anao ianao. Raha ny laika, inona no tanjona faratampon'ny orinasa? Mpivarotra, mpivarotra, olon-dehibe amin'ny serivisy… tokony ho fantatry ny olona rehetra ao amin'ny ekipanao ny valin'ity fanontaniana manakiana ity. Izy io no tokony ho zavatra voalohany fantatry ny olon-drehetra, takany ary karakarainy. Raha tsy voafaritra mazava tsara izany dia manontania hoe: Inona no ezahantsika hahatongavana? Inona avy ireo kitapom-bolan'ny fitomboana? Raha ny lojika, ny dingana manaraka dia mitaky fahatakarana izay azonao atao isan'andro hanampiana amin'ny fanatontosana izany paikady fitomboana izany. Raha fintinina dia ny fiovana tianao ho hita eo amin'ny orinasa.
Misy tanjona roa izany:
Mba hahazoana antoka fa mandany ny fotoananao amin'ny zavatra manandanja ianao.
Mitsahatra tsy manao zavatra tsy manao. Tsotra izany, saingy ho gaga ianao amin'ny habetsaky ny tabataba misy amin'ny ankamaroan'ny orinasa noho ny fisintahana ifotony eo amin'ny paikady sy ny tetika. Hahita fiovana manaitra ianao raha vao manomboka miasa avy amin'ny toerana misy paikady aloha. Raha tokony hirehareha amin'ny varotra hetsika iray ny marketing, toa ny fampiantranoana hetsika iray, ary avy eo mihazakazaka miaraka aminy tsy misy tanjona mazava eo imasony… hiato ianao. Hanontany ianao hoe: Inona no tadiavinay ho tanterahina? Iza no tadiavintsika hirotsaka? Fa maninona ity hetsika ity fa tsy fandraisana andraikitra hafa?
Matetika isika dia maheno momba ny orinasa B2B manenjika tetikady momba ny sandan'ny androm-piainan'ny mpanjifa, izay tanjon'izy ireo hampitombo ny vola miditra sy ny fanoloran-tena avy amin'ny mpanjifa efa misy hisolo ny vaovao. Ny kofehin-dohan'ny fikambanan'izy ireo iray manontolo dia tokony hisy fiantraikany amin'ny fikorontanana ratsy. Rehefa nametraka ny paikadinao ianao ary nametraka tondrozotra nifanaraka hatrany am-boalohany dia manomboka mandondona na dia ireo tanjonao avo indrindra aza ianao dia ho haingana kokoa noho izay tsy tokony hatao.
Dingana: Ahoana ny fomba fanamboarana ny saosisy
Aorian'ny fampiharana ny paikady, ary ny jiro mitarika amin'ny fanatanterahana dia dingana efa nieritreritra tsara. Raha ny tetikadinao dia momba ny sandan'ny androm-piainan'ny mpanjifa, toy ny ohatra nampiasako tetsy ambony, dia mety hifantoka amin'ny laser amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny mpanjifa matanjaka sy azo averina ary ny fizotran'ny kaonty ianao. Hodinihinao ny fomba hivarotana amin'ireo mpanjifanao efa lasa amin'ny dingana rehetra amin'ny fahamatorana, ary hamboarinao ny fomba ahafahanao mitahiry azy ireo mandritra ny dia kasainao ho azy ireo.
Ohatra, rehefa avy mividy ny vahaolana ny anao ny olona - inona ny tohiny? Eto no ahitanao ny endrik'ireo zana-tohatra tsirairay amin'ny dian'ny mpanjifa. Andao lazaina fa mividy Product X ny mpanjifa ary ny dingana manaraka dia ny fanomezana fiofanana momba ny fomba hahombiazana amin'izany. Aorian'izany dia mety ho tonga amin'ny fampianarana ny mpanjifa ny antony mety ilain'izy ireo ny vokatra Y, ary manomana azy ireo amin'ny fividianana sy ny fampiharana. Rehefa mametraka sarintany dingana mazava ianao ary mampifanaraka ny ekipanao manodidina azy, ary tarihin'ny tetikadinao be loatra io dia ho fantatry ny mpanjifanao tsara kokoa ny lanjao. Izany dia mitaky fikasana sy fanoloran-tena mafy amin'ny fitazonana ny paikadinao ho lohalaharana.
Teknolojia: Ny fanamafisana
Ary farany - ny tech tech anao (fantatro, nanantena ianao fa ho tonga amin'ity faritra ity). Voalohany, jereo fa ny teknolojiao no fahatelo amin'ity filaharana ity. Mbola ao anatin'ny ekipa nofinofy izy io, fa tsy ny mpilalao manomboka. Faharoa, ekeo ny ampahany tokony hataony - a manohana anjara asany. Jill Rowley, tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitomboana ao Marketo dia nilaza fa:
Ny adala manana fitaovana dia mbola adala ihany.
Handeha lavitra kokoa aho ary hiady hevitra fa vao mainka mahatsiravina ny zava-misy, satria io olona io izao a mampidi-doza adala.
Dingana ratsy, tapaka amin'ny tetikady, dia fomba fahandro azo antoka tsy fahombiazana rehefa manampy ny refy sy ny mandeha ho azy ny teknolojia. Ho lasa lavitra kokoa ianao, haingana kokoa - ary hanimba ny marikao. Ny fandrefesanao ny fahombiazan'ny paikadinao sy ny fomba fiasa dia tokony hamafisina amin'ny alàlan'ny teknolojiao. Ny rafitrao dia tokony hisambotra ny angon-drakitrao, mba hahafahanao mamakafaka azy ary avy eo maka fanapahan-kevitra manan-tsaina momba ny hijanonanao amin'ilay hazakazanao na ny marina.
Raha te-hanao an'io asa io dia mila tsipika fahitana mazava amin'ny sehatra hafa momba ny angona mpanjifa ny marketing. Tsy ampy ho an'ny sampana tsirairay ny mampiasa ny haitao fotsiny; tsy maintsy arindra amina fomba ihany koa izy io mba hahafahan'ny antonta-kevitra hampita sy hivoaka amin'ireo departemanta amin'ny fomba misy heviny. Rehefa mandrafitra ny rafitrao ianao mba hanamafisana ny làlan'ny paikady sy ny metodôlika dia ampitomboinao ny tanjony. Mety tsy dia manjavozavo toy ny fanaovana ny haitao ho kintana io, fa hanampy anao hahavita bebe kokoa izany ary hahazo valiny.
Fikambanana maro no tsy nahy nifantoka tamin'ny iray amin'ireo singa telo ireo ary namela ny roa hafa halazo ho mainty. Na, mbola ratsy kokoa aza, manandrana mitantana azy telo izy ireo - fa amin'ny silo. Rehefa misy ny tranga roa dia tsy natsangana ny ekipanao mba hahomby. Fa kosa, azonao atao ny manafaingana ny vola miditrao amin'ny alàlan'ny fametrahana ny paikady ho lohalaharana, arahin'ny fizotrany sy ny haitao - amin'izany lamina izany ary ho toy ny faritra telo amin'ilay ekipa mitovy. Ity no toerana mamy, ary toerana hahitanao fahombiazana miova endrika - ary mihafaingana.
Tags: jill rowleyfanatanterahana marketingdingan'ny marketingbarotra tetikateknolojia marketingmarketoMartechstack martechteknolojia
Justin Gray dia mpandraharaha serial ary CEO ary mpanorina ny LeadMD, maso ivoho asa lehibe indrindra manerantany amin'ny fidiram-bola, nametraka mihoatra ny antsasaky ny tobin'ny mpampiasa Marketo. Justin dia nanao ny asany tamin'ny fananganana orinasa mahomby ary fanamafisana azy ireo, miaraka amin'ny fivoahana mahomby mihoatra ny 200MM + tao anatin'ny folo taona lasa. Ny ezaka farany nataon'i Justin dia natomboka tamin'ny taona 2016 rehefa niara-nanorina izy Biriky enina, fanombohana fampianarana an-tserasera natao hiadiana amin'ny fihenan'ny mpiasa sy ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanabeazana miorina amin'ny traikefa. Nandritra izay 10 taona lasa izay, Justin dia nanjary feo matanjaka ho an'ny fandraharahana, ny marketing ary ny kolontsaina. Amin'ny maha mpandahateny fanta-daza azy, Justin dia efa navoaka in-350 tamina famoahana indostrialy ary mitazona ny tsanganany manokana, Tribal Know, ao amin'ny Inc., sady manoratra ho an'ny Mpandraharaha, Tech Crunch sy ny hafa koa. Justin sy ny vadiny Jennifer dia nihaona tamin'ny marketing ary telo taona taty aoriana dia nandray ny zanany lahy, Grayson, teto amin'izao tontolo izao tamin'ny volana aprily 2017.
Mpanoratra? Fomba 7 matanjaka hahatonga ny bokinao ho mpivarotra varotra iraisam-pirenena
OneSignal: Ampio Fampandrenesana Push amin'ny Desktop, App, na mailaka